Hirshabeelle oo dhibaatada Hiiraan dusha ka saartay Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Wuxuu is weydiiday sababta uu Xuud u aqbalay inuu ka tanaasulo guud ahaan tabashooyinkii reer Hiiraan, waliba uu ka aqbalo Biixi, oo wakiil ka ah, Farmaajo oo shantii sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay lug-gooyada reer Hiiraan.
JOWHAR, Soomaaliya – Dowlad gobolleedka Hirshabeelle ayaa Kooxda Heer Federaal ee waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, markii ugu horreysay ku eedeysay in ay masuul ka yihiin dhibaatoyinka siyaasadeed ee ka aloosan Hiiraan, kuwaas oo sababy in MW Maamulkaas Cali Guudlaawe uusan wali cagaha dhigin Baladweyne.
La-taliye sare, Cabdikariin Nuur Xasan [Doob-yare] oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow Guudlaawe, ayaa Villa Soomaaliya dusha u saaray guud ahaan dhibaatooyinka Hiiraan, wuxuuna xusay in Farmaajo iyo Kooxdiisu diiddan yihiin in MW Hirshabeelle tago Baladweyne.
Doob-yare, wuxuu sheegay in Maamulka Hirshabeelle uusan waxba kala socon wada-hadallada General Abuukar Xaaji Warsame [Xuud], lagu geeyay Muqdisho, wuxuuna xusay in markii horaba Kooxda hadda geysay Caasimadda ay ku biilayeen degaanka Ceel-gaal, si uu carqalad ugu ahaado hor-u-socodka maamulka, waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Ma aragno wadahadal, ee waxaan u jeednaa isku dir, dadkii shalay wax tabanayay oo aan rabitaankooda laga qancin, in nin sarkaal ah [Biixi] oo socda inta gobolka tago uu sarkaal kale oo ay markii hore is ogaayeen gacanta soo qabto oo diyaarad soo saaro ayaa aragnaa ee heshiis uma jeedno” ayuu yiri.
Wuxuu xusay in Kooxda Farmaajo, ay xitaa diideen in Wasiirka Arrimaha Gudaha, Gen. Mukhtaar, oo reer Baladweyne ah garwadeyn ka noqdo xal u raadinta kiiska Xuud, wuxuuna sheegay in MW Maamulkaas, Guudlaawe, uusan aqabli doonin fara-galinta ay Madaxtooyadu ku heyso Maamulka.
Wuxuu is weydiiday sababta uu Xuud u aqbalay inuu ka tanaasulo guud ahaan tabashooyinkii reer Hiiraan, waliba uu ka aqbalo Biixi, oo wakiil ka ah, Farmaajo oo shanti sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay lug-gooyada reer Hiiraan.
Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), wuxuu Madaxweynaha HirShabeelle Cali Guudlaawe, ku eedeyn jiray inuu yahay adeege Farmaajo, hayeeshee, ugu danbeyn Xuud, wuxuu u xuub-siibtay adeegi Biixi iyo u Guule-wadeyn Farmaajo.
Xogo, muhiim ah oo ay heshay KON, ayaa sheegaya in Xuud oo hadda dhowr cisho ku hoyanaya caasimadda uusan wali la kulmin Farmaajo iyo Fahad Yaasiin midna.
Koox uu hoggaaminayo Fahad Yaasiin, ayaa doonaya in ay dhawaan u socdaalaan Baldweyne, si ay u raadsanaan kusaas Baarlamaan, kadib markii Cali Guudlaawe, ka baxay ballaan uu hore u qaaday oo ku aaddaneed inuu rari doono degaan doorashada qaar ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka ee taalla Hiiraan.